Wasaaradda Adeegga Bulshada oo kulan u furtay ururada u dhaqdhaqaaq haweenka – idalenews.com
Wasaaradda Adeegga Bulshada oo kulan u furtay ururada u dhaqdhaqaaq haweenka
Wasaaradda Hormarinta Aeegga Bulshada Xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho kulan balaaran uga furtay ururada u dhaqdhaqaaq Haweenka iyadoo kulankaasina looga hadlayo sidoo loo yareyn lahaa Dhimashada Haweenka Umul raacda iyo Ilmaha Da’doodu ka hooseyso Shanta Sano.
Shirkan oo ahaa mid ay wasaaradda hormarinta adeega bulshada xukuumada Soomaaliya ay iskugu yeertay qeybaha kala duwan ee ururada haweenka gobolka Banaadir isla markaana lagu gorfeeynayay sidii looga qeyb qaadan lahaa ka hortaga dayaca keena dhimashada sahalka ah ee hooyada iyo dhalaanka la kulmaan xilliyada dhalmada , iyo sidii loola dagaalami lahaa tacadiyada lagula kaco dumarka Soomaaliyeed.
Waxaa shirkaasi dadkii ka qeyb galay ka mid ahaa wasiirka wasaaradda adeega bulshada Maryan Qaasin Axmed, mudaneyaal ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya, ururka haweenka Qaranka iyo qaar ka mid ah ururada haweenka Soomaaliyeed oo dhamaantodba ay ka muuqdeen dareen wadaniyadeed.
Haweenki iskugu yimid madashaasi oo fikiro kala duwan soo jeediyay ayaa balan qaaday in ay ka qeyb qadanayaan badbaadinta hooyada iyo dhalaanka islamarkaana ay ka hortagayaan wax yeelada loo geysanayo gabdhaha Soomaaliyeed.
Sidoo kale gudoomiyaha gudiga xuquuqul insaanka baarlamaanka Soomaaliya xildhibaanad Khadiijo Maxamed Diiriye oo goobta ka hadashay ayaa tilmaamtay in wax laga xumaado ay tahay in haweenka iyo carruurta Soomaaliyeed ay u geeriyoodaan nafaqo daro waxeyna xustay in haweenka baarlamaaka ay marwalba hiil iyo hooba la garab taagan yihiin wasaaradda adeega bulshada.
Ugu dambeynti wasiirka wasaaradda hormarinta adeega bulshada Maryan Qaasin Axmed ayaa haweenka Soomaaliyeed ugu baaqday in la badbaadiyo haweenka Soomaaliyeed meel qurana laga wada istaago ladagaalanka tacadiyada haweenka.
Wasiirada ayaa intaa raacisay in xooga ay wasaaradu saari doonto waxbarashada gabdhaha si loo helo gabdho aqoon leh oo berri dalkooda wax tari kara si ay u yaraato aqoon la’ida gabdhaha.
Shirkan ayaa ahaa mid gogol xaar u ah shir balaaran oo ay wasiiradu iclaamisay in 28ka bishan ay iskugu yeeri doonto qeybaha kala duwan ee haweenka Soomaaliyeed si looga wada tashto aayaha iyo wax qabadka haweenka Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan iyadoo halkudhigii maanta uu ahaa aan badbaadino Faadumo Soomaali oo jeedkiisu ahaa dumarka Soomaaliyeed aan badbaadino.
Maamulka Puntland oo sheegay in aad loo adkeeyay amaanka magaalada Boosaaso
Shirkad Laga Leeyahay Dalka Turkiga Oo Muqdisho Ka Dhisi Doonta Garoon Diyaaradeed Oo Cusub “DAAWO NAQSHADDA”